သူ့လို နနေိုငျခငျြလိုကျတာ … – Shinyoon
သူ့လို နနေိုငျခငျြလိုကျတာ …
January 7, 2021 by Shin Yoon
ဒီစကားလေးရရှေတျနမေိတာ အတေျာ့ကို ကွာနပွေီ ဒါပမေယျ့ သူ့လိုနနေိုငျသှားမှာကတြော့ ကြှနျမ ကိုယျတိုငျကွောကျနမေိတယျ … သူ့လိုနလေိုကျမယျဆိုရငျ ကြှနျမတို့နှဈယောကျ တဈယောကျကိုတဈယောကျ တကယျကို ဝေးသှားကွတော့မှာလေ. …
သူ့လိုနလေိုကျဖို့ဆိုတာကလဲ မလှယျဘူးလေ သိတယျမလား ကိုယျက ခဈြမိသူဆိုတော့ ကိုယျကပဲ လှမျးရတတျတယျ သူအဆငျပွနေမှေနျးသိနရေဲ့နဲ့တောငျ သူ့အသံမကွားရရငျ ကိုယျအဆငျပွမေနခေဲ့ဘူး ဒါကွောငျ့ပဲ သူမချေါခဲ့တဲ့ဖုနျးကို ကိုယျပဲဆကျရတယျ ..
တခြို့ကတော့ ကိုယျ့ကိုစာနာကွတယျ ဘာကွောငျ့အတငျးတှယျကပျနမေလဲတဲ့ ကိုယျ့အစားသူတို့က နာပေးခဲ့ကွတယျ ကိုယျကိုယျတိုငျက မနာတတျခဲ့တာပါ … စိတျနာတတျခဲ့မယျဆိုရငျ နာစရာတှမှော အမြားကွီးပါပဲ ဒီကွားကပဲ ခဈြတဲ့စိတျတဈခုကိုပဲ တဈစိုကျမတျမတျ ဖကျတှယျထားမိတာပါ …
မနကျ Morning ည Good Night တှကေအစ ကိုယျ တနျဖိုးထားပွီး ပို့မိနတေုနျးပဲ ထမငျးစားခြိနျဆို ထမငျးစားပွီးပွီလားဆိုတာမြိုး အပွငျသှားတတျတဲ့အခြိနျတှဆေို …. ဂရုစိုကျဖို့တဖှဖှမှာနမေိတုနျးပဲ အေးစကျသှားတဲ့ အရာတဈခုကို နှေးထှေးလာဖို့ကွိုးစားရငျးပေါ့
တဈခါတဈလတေေ့ သူ့လို နနေိုငျခငျြလိုကျတာဆိုတဲ့ စကားလေး ရရှေတျမိတဲ့အထိ ဆန်ဒတှဖွေဈမိတယျ သခြောတာတဈခုကတော့ သူ့လို ကြှနျမ နနေိုငျသှားတဲ့တဈနေ့ သူနဲ့ ဘယျတော့မှ မဆုံအောငျ ဝေးကွရတော့မှာ ..
သူ့လို နေနိုင်ချင်လိုက်တာ …
ဒီစကားလေးရေရွှတ်နေမိတာ အတော့်ကို ကြာနေပြီ ဒါပေမယ့် သူ့လိုနေနိုင်သွားမှာကျတော့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ကြောက်နေမိတယ် … သူ့လိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တကယ်ကို ဝေးသွားကြတော့မှာလေ. …
သူ့လိုနေလိုက်ဖို့ဆိုတာကလဲ မလွယ်ဘူးလေ သိတယ်မလား ကိုယ်က ချစ်မိသူဆိုတော့ ကိုယ်ကပဲ လွမ်းရတတ်တယ် သူအဆင်ပြေနေမှန်းသိနေရဲ့နဲ့တောင် သူ့အသံမကြားရရင် ကိုယ်အဆင်ပြေမနေခဲ့ဘူး ဒါကြောင့်ပဲ သူမခေါ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကို ကိုယ်ပဲဆက်ရတယ် ..
တချို့ကတော့ ကိုယ့်ကိုစာနာကြတယ် ဘာကြောင့်အတင်းတွယ်ကပ်နေမလဲတဲ့ ကိုယ့်အစားသူတို့က နာပေးခဲ့ကြတယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မနာတတ်ခဲ့တာပါ … စိတ်နာတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နာစရာတွေမှာ အများကြီးပါပဲ ဒီကြားကပဲ ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုပဲ တစ်စိုက်မတ်မတ် ဖက်တွယ်ထားမိတာပါ …
မနက် Morning ည Good Night တွေကအစ ကိုယ် တန်ဖိုးထားပြီး ပို့မိနေတုန်းပဲ ထမင်းစားချိန်ဆို ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုတာမျိုး အပြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်တွေဆို …. ဂရုစိုက်ဖို့ တဖွဖွမှာနေမိတုန်းပဲ အေးစက်သွားတဲ့ အရာတစ်ခုကို နွေးထွေးလာဖို့ကြိုးစားရင်းပေါ့
တစ်ခါတစ်လေတေ့ သူ့လို နေနိုင်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ စကားလေး ရေရွှတ်မိတဲ့အထိ ဆန္ဒတွေဖြစ်မိတယ် သေချာတာတစ်ခုကတော့ သူ့လို ကျွန်မ နေနိုင်သွားတဲ့တစ်နေ့ သူနဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆုံအောင် ဝေးကြရတော့မှာ ..
အစကသိပျခဈြခဲ့ပွီးမှ ဘာကွောငျ့ဆကျမခဈြနိုငျတော့တာလဲ …